Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : January 2014
संसार देख्दाको आनन्द
गोपीकृष्ण ढुंगाना | बिषय: फूर्सद
आँखा हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ ? यो फरक आँखा देख्नेहरुलाई नसोधे हुन्छ। यहाँ तीनजना पात्र छन्, जोसँग आँखा नदेखेको र देखेको दुइवटै अनुभव छ। उनीहरुका निम्ति आँखाको दृष्टिकोण आफ्नै किसिमको छ। तिलगंगा आँखा अस्पतालले २०५१ भदौ ३१ गतेदेखि हालसम्म झन्डै १० हजारजनालाई आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। हालसम्म ४५ हजारजनाले आँखादानको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले तीन प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छन्। उनीहरुसँगको आँखा अनुभवः
जीवनकै धेरै खुसी
डडेल्धुरा, हाल कीर्तिपुर
त्यति खुसी यसअघि न कहिल्यै भएकी थिएँ न अब हुनेछु। मेरा लागि आँखाको नानी दान गर्दिने त्यो नचिनेको मान्छेलाई बारम्बार धन्यवाद दिइरहेकी छु। अनि आँखाको नानी फेर्न मिल्ने प्रविधि बनाउने र फेर्ने डाक्टरलाई पनि म जीवनभर बिर्सन्नँ।
दुई वर्षअघि देब्रे आँखाको नानी फेरेपछि संसारलाई भिन्नै दृष्टिले महसुस गर्न पाएकी छु। नानी फेरेको रात दुखेको र भोगेको व्यथा बिर्साइदियो, पर्सिपल्ट आँखा खोलेको क्षणले। त्यति बेला मैले आफ्नो खुसी नियन्त्रण गर्न सकिनँ।
त्यसअघि आँखा कम देख्दा मनमा एकदमै चिन्ता हुन्थ्यो। सम्भावनाको अर्को पाटो कायमै थियो, स्नातक पढिरहेकी छु, योग्य छु। कति आँखा नदेख्नेहरू छन्, तिनले त गरिखाएका छन् भने म किन केही नगरूँला?
बीबीए अन्तिम वर्ष पूरा गरेँ। पक्कै पनि जीवनलाई सार्थक बनाउने छु। मलाई यस्तै लाग्थ्यो। डडेल्धुरा मेरो गृहजिल्ला। कक्षा ८ मा पढिरहँदा आँखा चिलाउन र बिझाउन थाल्यो। नजिकको औषधि पसलमा गएँ। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आँखामा ‘ड्रप’ हाल्न थालेँ। समस्या समाधान भएन, झन् चर्किंदै गयो।
आफन्त र छरछिमेकीको सल्लाहले राजधानी आएँ। तिलगंगा अस्पतालमा डा. सन्दुक रुइतलाई देखाएँ। केही राहत भयो। अरू बेला त ठीक भयो तर गर्मी मौसममा भने समस्या ज्यूँ का त्यूँ। एलर्जीले मेरो आँखा क्रमश: कमजोर हुँदै गयो। दाहिने आँखामा भने कुनै समस्या छैन।
जतिजति कमजोर हुँदै गयो त्यतित्यति चस्माको पावर थप्दै गएँ। त्यसपछि प्रत्येक साता कीर्तिपुरकै क्लिनिकमा भवानी पन्तलाई आँखा जाँच गराइरहन थालेँ। अत्यन्तै कमजोर भएपछि मलाई उहाँले लायन्स क्लब पठाउनुभयो। क्लबबाट फेरि तिलगंगा आँखा अस्पताल पठाइयो।
मैले आँखा नदेख्ने समस्या मेरो परिवारबाहेक कसैलाई बताइनँ। आँखा कमजोरमात्र भन्थेँ, साथीहरू क्याम्पसमा अगाडिको बेन्चमा बस्न सहयोग गर्थे। कहिलेकाहीँ क्याम्पसमै लड्थेँ तर थाहा नपाउने गरी उठ्थेँ। साथीले हेप्लान् भनेर भित्री कुरो खोलिनँ।
म क्याम्पसमा पढ्नुका अतिरिक्त रिभर भ्याल्लीमा पढाउँथे पनि। कडा घाम लागेको समयमा ‘सन ग्लास’ लगाउँछु, अरू बेला ‘पावर ग्लास’। बाहिरी संसारमा एउटा आँखाको हेराइ कम भएर के भयो र? भित्री मनको फराकिलो र आत्मविश्वासले भरिएका आँखाले मलाई शक्ति दिएकै थियो। प्रविधि विकासले समस्या सधैं नहोला भन्ने लागेर चिन्ता लिन्नथेँ।
कीर्तिपुरमा म जहाँ बस्छु, त्यसको छेवैमा दृष्टिविहीन पनि बस्छन्। म उनीहरूलाई बेलाबखतमा सहयोग गर्छु। आँखाको ज्योति गुम्न लाग्दा चिन्ता त मनभरि हुँदो रहेछ तर दृष्टिविहीनको विवाह भएको, उनीहरूले छोराछोरी पाल्न सकेको, जागिर खाएको र सहयोगबाट जताततै पुगिरहेको देख्दा त्यसले मेरो आत्मविश्वास बढाएको छ। अझ दुई वर्षअघि नानी फेरेपछि मैले त पुनर्जीवन नै पाएको छु। ‘आँखा दान महादान’ भनेर केही वर्षदेखिको नारा अभियानकै रूपमा चलाइएको छ। मृत्युपछि गरिने आँखा दानका लागि कुनै उमेर वा रोगले फरक नपर्ने भएपछि दान गर्न पनि समस्या हुने कुरै भएन। आँखा दान महादानले मेरो चिन्ता दूर गरेको छ। म जीवनदेखि खुसी छु।
खुसीले रोयो मन
युवापुस्ता त संसार हेर्न चाहन्छ नै। वृद्धवृद्धा हुँदाको पीडा, त्यसमाथि आँखा बन्द। झन् कति पीडा होला? क ल्पना गर्दा पनि कस्तोकस्तो हुन्छ। म ३५ वर्षदेखि वृद्धाश्रममा बस्दै आएको छु। वर्षले ९३ मा छु। वर्षौंको यातनापछि आँखाको ज्योति पाएँ।
तीन दशकभन्दा बढी भएछ वृद्धाश्रममा परिवार, आफन्त र छरछिमेक सबैलाई छोडेर एक्लै बसेको। तैपनि स्वर्गको बास भएको ठानेको छु। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो, फेरिएको आँखा। त्यति बेला इन्डियन लाहुरे थिएँ। परेलाले घोचेजस्तो भयो, अस्पतालमा भर्ना भएँ। सेनाको अस्पताल हुँदै वीर अस्पताल आइपुगेको भोलिपल्टै आँखा तिरमिर हुन थाल्यो। अन्तत: अलिअलिमात्र देख्ने भएँ।
आँखा नदेख्ने भन्दै ‘लाहुरे’ बाट हटाए। उपदानस्वरूप पाएको एघार सय रुपैयाँ कता पुग्यो कता। दुईचार वर्ष कान्छी १३ वर्षकी युवतीसँग बिहे गरेर भारत गएँ। बिदामा एकपटक स्याङ्जास्थित घर पुगेँ र दुई महिनाजति परिवारसँग बसेँ। पछि उनलाई आफ्नो मनोदशाका कारण घर फर्कन मन लागेन।
आँखाले धोका दिएपछि मैले घरबाट अंश लिन पनि उचित ठानिनँ। त्यसैले केही नभएको म ‘गरिखान’ बाराको निजगढतिर पुगेँ। कम देख्ने आँखाका कारण मुस्किलले धान काट्नेजस्ता खेतीको काम गर्न थालेँ। केही गर्‍यो कि लडिजाने, कतै हिँडे पनि लडिहाल्ने हुन्थ्यो। मनको बह कसैलाई नकह भनेझैं चुपचाप दिन बिताउँदै गएँ। अति भएपछि काठमाडौं फर्किएँ।
भोट हालेका प्रधानपञ्चको सहयोगमा तिलगंगा पुगेँ। आँखामा नयाँ नानी हालेँ। तिलगंगा आँखा अस्पतालकी डाक्टर रीता गुरुङले ‘नानी फेर्नुपर्छ आँखा देखिन्छ’ भनेपछि खुसीले गद्गद् भएँ। १८ वर्षअघिको प्रसंग हो, त्यति बेला उहाँले नानी खोजेर आउँछौं अनि फेरौंला भन्नुहुँदा मन खुसीले रोएको थियो।
केही सातापछि बोलाइयो। सुई लगाउनुभयो, बोल्दाबोल्दै नानी फेर्दिनुभएछ। त्यसपछि देब्रे आँखाको नानी पनि फेर्नुपर्‍यो। वृद्धाश्रममै बस्दै आएका वल्लभबहादुर भुजेल बित्नुभयो। अस्पतालले उहाँकै नानी मेरो आँखामा राखिदियो। उहाँलाई सधैं आशिक दिइरहन्छु, स्वर्गमा बास होस् भनेर।
आँखाले धोका नदेओस्
जीवनको कुनै एक क्षण म हदैसम्म हतोत्साही बनेँ जति बेला मेरा दुवै आँखा बन्द भए। अब जिन्दगी नै सकियो भन्ने लागेको थियो। ‘टेन्सन’ त कति हो कति? हरेश पनि थोरै खाइएन। आँखाको उपचारमा खर्च के लाग्छ? त्योभन्दा कयौं गुणा त ‘टेन्सन’ हुँदो रहेछ। एक किसिमले ‘डिप्रेसन’ नै भएको महसुस गरेँ मैले।
वर्षले ४७ लागेको छु। यत्तिका सहज ढंगले जीवन चल्ला भन्ने क ल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्था पार गरेँ। ठूलो कुरो त आँखाले काम नगरेपछि जति बेला पनि अरूको सहारा लिनुपर्ने कुराले मलाई ज्यादै निरीह बनाएको थियो। केही गर्न मन नलाग्ने, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने। सहाराबिनाको जीवन बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमात्र लागिरहन्थ्यो।
मलाई बच्चैदेखि आँखाको इन्फेक्सन हुन्थ्यो। भाइरल संक्रमण हुँदा आँखामै आक्रमण हुन्थ्यो। आँखा रातो हुँदै जान्थ्यो र अन्तिममा नानीमा प्वाल पर्थ्यो। ज्योतिभवनस्थित होन्डाको सो रुममा काम गर्छु। मैले यो उमेरसम्ममा तीनपटक आँखाको नानी फेरिसकेँ।
पछिल्लो सात वर्ष ढुक्क छु। अहिले संसारलाई आफ्नै आँखाले हेर्न पाएको छु। चर्को घाम लागे सुरक्षाका लागि ‘चेन्जेबल ग्लास’ लगाएको छु। ढुक्क भए पनि धूलो र धूवाँबाट जोगिन्छु। भगवान्सँग मेरो एउटै आग्रह छ, ‘आँखाले कसैलाई पनि धोका नदेओस्।’
Labels: आँखा, गोपीकृष्ण ढुंगाना, दिलबहादुर रानाभाट, ध्रुवरत्न स्थापित, भागिरथी शाह
Kamila Ko Doctor
Labels: Doctor, gopi krishna dhungana, Kamilaa, Sajha
तीनकुनेमा बन्दैछ बगैंचा
काठमाडौं : राजधानीको कोटेश्वर तीनकुनेमा आधुनिक र सुन्दर बगैंचा (पार्क) निर्माण गरिने भएको छ।
वर्षौंदेखि अलपत्र ३५ रोपनी जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा पार्क बनाउन लागेको हो।
डिजाइनमा संलग्न महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार पार्कमा सयौं प्रजातिका फूल रोपिनेछ भने पानीका फोहोरा पनि बन्नेछन्। तीन कुनामा नेपाल झल्काउने स्मारक पनि बनाइनेछ। पार्कमा हरियो दुबो र विभिन्न जातका फलफूलका बोटसमेत रोपिनेछ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालका अनुसार पार्कका बीचमा अग्लो थुम्को र वरिपरि होचा थुम्का बनाइनेछ।
एक महिनाभित्रै पार्क निर्माण थालिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तीनकुनेको खुला ठाउँ घेर्न ठेकेदारसँग यसै साता सम्झौता हुनेछ।’ हाल कार र मोटरसाइकल सिक्न प्रयोग भइरहेको ठाउँलाई तारबारले घेर्न महानगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ।
पार्कभित्र ‘मर्निङ वाक’ गर्नेहरूलाई हिँड्ने भित्री बाटो, फलामका कुर्सी र बेन्च राख्ने योजना छ। महानगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले तीनकुनेमा पार्कसँगै भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना पनि तयार पारेका थिए।
पूर्वमेयर केशव स्थापितले २०५८ सालमा त्यहाँका घर भत्काएका थिए। त्यतिबेला करिब ५३ रोपनी रहेको जग्गा तीनतिरबाट सडकले ओगटेर अहिले करिब ३५ रोपनी बाँकी छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले तीनकुनेमा बन्ने बगैंचाले महानगरको सुन्दरता थपिने बताए। जस्तोसुकै समस्या आए पनि पार्क निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अठोटमा महानगरपालिका छ। ‘जति विरोध आए पनि यसपटक काम थाल्छौं’, पोखरेलले भने। बगैंचा बनिसकेपछि सबै व्यवस्थापन महानगरले नै गर्नेछ।
बगैंचा निर्माणका लागि स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइसकेको जानकारी उनले दिए। केही जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेकाले ती जग्गाधनीलाई खबर भइसकेको उनले बताए। मुआब्जा वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत हुनेछ।
मिति : २०७० माघ १२, आइतबार [677 पटक पढिएको]
Labels: गोपीकृष्ण ढुंगाना, तीनकुने, लक्ष्मण अर्याल, शान्तराम पोखरेल
किन मनाउने एकता दिवस ?
जगमान गुरुङ नेपालको वर्तमान अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक ठान्छन्। ‘नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ। नेपाली संस्कृति कच्पचिएको छ। नेपालको राष्ट्रियता धमिलिएको छ। नेपाल राष्ट्र विखण्डनको दिशातर्फ धकेलिएको छ’, जगमान भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर गर्दै उनको मार्गनिर्देशन अनुसरण गर्नु अपरिहार्य छ।’
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पृथ्वीनारायण शाहका सालिक र मूर्ति तोडफोड भए। सरकारले पनि परम्म्म् परागत रूपमा मनाउँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउन छोड्यो। त्यतिमात्र होइन, उक्त दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा पनि तोडियो। जगमानका अनुसार राष्ट्रिय एकता दिवस बिनाको मुलुक संसारमा कुनै छैनन्।
‘अहिले नेपाल एकता दिवसविहीन देश बनेको छ’, जगमान भन्छन्, ‘नेपालीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मानेर आआफ्नो पहिचानसहित मुलुकको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको विकास र अग्रगमनतिर जुट्नुपर्छ। यसका लागि प्राज्ञिक चिन्तन र बौद्धिक अभ्यासको खाँचो छ।’
विगत नै वर्तमानको आधार हो। गणतन्त्रवाद आत्मसात् गर्ने कतिपय मानिस विगतलाई स्वीकार्न तत्पर छैनन्। यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन राज्यले कज्युस्याईं गरिरहेको छ। कसैकसैको मान्यता छ, एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भनेको शाहवंश वा राजतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।
इतिहासविद् रमेश ढुंगेल दिवस र जयन्ती मनाउने सन्दर्भलाई शाहवंशको जगेर्ना र राजतन्त्र फर्काउनेसँग जोड्नु गलत बुझाइ भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यतिमात्र भएको छैन, पृथ्वीनारायणका उपदेशको अपव्याख्यासमेत भइरहेका छन्। उनको योगदान र राष्ट्रिय चिन्तन अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सोचसम्म देखिँदैन।’
हरेक नेपालीले नेपालप्रति गर्व गर्छ भने उसले पृथ्वीनारायणलाई सम्झिनैपर्ने ढुंगेलको तर्क छ। पुस २७ गतेलाई विगतका वर्षजस्तै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरी सरकारले नै राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउने घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनी थप्छन्, ‘पृथ्वीनारायणको योगदानको उचित मूल्यांकन र कदर गर्दै एउटा सरकारी तहमा र एउटा नागरिक तहमा समिति बनाउनुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन, पृथ्वीनारायणको योगदान पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ।’ राज्यले उपेक्षा गरे पनि जनताले राष्ट्रिय एकता दिवस तथा २९२ औं पृथ्वी जयन्ती नागरिक मूल समारोह समिति गठन गरेका छन्। रमेश ढुंगेलको संयोजकत्वमा बनेको यो एक हजार एक सदस्यीय समितिले पृथ्वीनारायणको दिवस र जयन्ती मनाउँदैछ। पृथ्वीनारायणको योगदानको कदर गर्दै पुन: सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भन्दै अभियान नै चलाइरहेको छ।
इतिहासविद् वीणा पौड्याल पनि विगतमा भएका त्रुटिसँग सबै घटनालाई जोडेर लत्याउन नमिल्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘जातीयता र क्षेत्रीयताका आँखाले नेहेर्ने हो भने १७औं शताब्दीको अन्त्यको त्यो समयमा गरेको एकीकरणको प्रयास चानचुने होइन।’ युरोप र अफ्रिकामा गरिएका यस्ता प्रयासलाई पछिल्लो पुस्ताले सम्मान गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनी थप्छिन्, ‘तत्कालीन समयमा आर्थिक अवस्था, कम संख्यामा सेना र भौगोलिक परिवेशले समेत कमजोर हुँदाहुँदै पनि पृथ्वीनारायण शाह मनोबलकै भरमा नेपाललाई एकसूत्रमा बाँध्न सफल भएकै हुन्। उनलाई अहिलेको परिवेशमा तुलना गरेर कम आँक्नै मिल्दैन।’
खासमा यतिबेला गुमेको साख फर्काउने अभियान चलेको छ। ढिलो चाँडो स्वतन्त्र मस्तिष्कले आफूलाई राष्ट्रप्रति समर्पित गर्नेहरूले दिवस र जयन्तीलाई समर्थन गर्नेछन् भन्नेमा इतिहासविद् विश्वस्त छन्। पृथ्वीनारायणले दुई सय ५० भन्दा बढी टुक्रे राज्यलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न ठूलै जोखिम मोलेको इतिहास सबैसामु छर्लंग छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती अंग्रेजसँगको डर हुँदाहुँदै पनि लडाइँ गरिरहनु र एउटा राज्यको मात्र राजा भएर सीमित सोचमा नबस्नुजस्ता विशेषताले उनलाई जीवित तुल्याएको छ। वीणा पौड्याल भन्छिन्, ‘गोरखाकै भएर पनि उनले आफूलाई नेपालीको पहिचानमा स्थापित गर्नु महान् कार्य हो।’
‘मेरा साना दु:खले आज्र्याको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फूलबारी हो’ भन्ने पृथ्वीनारायणको राष्ट्रियता खतरामा पर्दैछ भन्ने आधारहरू वर्तमान नेपाली राजनीति हेरे पाइन्छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएको हरेक क्षेत्रको कमजोर र दयनीय अनि अस्थिी अवस्थाले यसको प्रमाणित गरिरहेको छ।
वास्तवमा पुर्खाको रगत र पसिनाले सिञ्चिएको नेपाली भूमिको अस्मितामाथि आइपरेको खतरा पन्छाउन सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुन आवश्यक देखिएको इतिहासविद् बताउँछन्। एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती नागरिक मूल समारोह समितिका पूर्वसंयोजक मोदनाथ प्रश्रित भन्छन्, ‘दुई ठूला शक्तिशाली मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो देश नेपालभित्र हामी आपसी झगडा, द्वेष र विभाजनकारी चर्का नारा लगाएर होइन, आपसी मेलमिलाप, एकता र पारस्परिक सम्मानको भाव चढाएरमात्र शान्ति र सुरक्षासहित बस्न सक्छौं।’ उनी यसबाट मात्र पृथ्वीनारायणको सम्मान हुने बताउँछन्।
अर्का इतिहासविद् त्रिरत्न मानन्धर भारतमा भारत स्वतन्त्र भएको सन्दर्भमा महात्मा गान्धीको जयन्ती मनाउने प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘आधुनिक नेपालको निर्माणकर्ता म् अथवा नेपालको एकीकरण गर्ने व्यक्ति अरू को छ र? पृथ्वीनारायणको योगदानको कदर गर्दै सम्मान स्वरूप दिवस र जयन्ती किन नमनाउने?’ उनी दिव्योपदेशका कतिपय वाक्यहरू अझै पनि सान्दर्भिक भएकाले तिनलाई अनुसरण गर्न आग्रह गर्छन्।
इतिहासविद् दिनेशराज पन्त नेपालमा रहनु परेकाले दु:ख भइरहेछ भन्नेहरूका लागि भने पृथ्वीनारायणको योगदान महत्त्वको नहुनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपाल र नेपालीको स्वार्थका लागि पनि पृथ्वीनारायण अपरिहार्य छन्। हामीले उनको वीरता र साहसको पाठ कति र कसरी बुझ्यौं भन्ने हो।
बुझ्नेले उनलाई कदर गर्छ नै।’ इतिहास नपढेका र गलत इतिहास पढेकाहरूले पृथ्वीनारायणको जयन्ती र एकता दिवस नमान्ने घृष्टता गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। थप्छन्, ‘युगसापेक्ष अघि बढ्न पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्दै र सम्म् झँदै अघि बढ्न जरुरी छ।’
मिति : २०७० पुस २७, शनिबार
Labels: जगमान गुरुङ, त्रिरत्न मानन्धर, दिनेशराज पन्त, रमेश ढुंगेल, वीणा पौड्याल
Micro Film of Hasta Likhit Grantha
Bhojan Prasadi Griha
प्राचीन कपिलवस्तु दरबारको उत्खनन गरिने
काठमाडौं : बेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक रविन कनिङघमले तिलौराकोटमा रहेको प्राचीन कपिलवस्तु दरबारको उत्खनन गर्ने भएका छन्। पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर उनले आगामी सातादेखि उत्खनन गर्ने भएका हुन्।
विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जापनिज फन्ड इन ट्रस्टको दोस्रो परियोजनाअन्तर्गत दरबारको उत्खनन हुन लागेको जानकारी दिए। उनले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, 'कनिङघमले उत्खनन गरेपछि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पिप्रहवालाई पनि 'प्राचीन कपिलवस्तु' भनी गरिएको दाबी सही होइन भन्ने पुष्टि मिल्नेछ।'
उपकुलपति कनिङघमले श्रीलंका, पाकिस्तान र बेलायतका थुप्रै ठाउँको पुरातात्त्विक उत्खनन गरेका छन्। उनले लुम्बिनी र लुम्बिनी क्षेत्रको उत्खनन गरी गतवर्ष ईशापूर्व १२५० देखि १३०० को लुम्बिनी गाउँ पत्ता लगाएका थिए। यसका साथै हालको मायादेवीको मन्दिर भन्दाअघि पनि काठद्वारा निर्मित झिँगटीको छानाको मन्दिर भएको पनि पत्ता लगाएका थिए। उक्त उत्खननको प्रतिवेदन विभागलाई बुझाएका थिए।
प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले पिप्रहवामा तेस्रो शताब्दी ईशापूर्वसम्मका पुरातात्त्विक सम्पदाहरू पाइएको तर नेपालको कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा आठौं शताब्दी पूर्वका सम्पदाहरू पाइएको बताए। उनले भने, 'कपिलवस्तुमा उत्तरी काला माटाका भाँडाकुँडा, पेन्टेन्ड ग्रे वेयर, नदीकिनारा भेटिएको छ तर पिप्रहवामा यी कुनै छैनन्।'
नेपालको कपिलवस्तु दरबारको वरिपरि सुरक्षा कि ल्ला (फोटिफिकेसन वाल) भएको तर पिप्रहवामा नभएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, 'उता विहारको संरचनामात्र छ यता बस्तीको सबै विशेषता पाइएको छ।' तर पनि सन् पिप्रहवालाई कपिलवस्तु भनी सन् १९७० देखि ७६ मा दाबी गरेका थिए। पीसी मुखर्जीले भने सन् १८९८ मै कपिलवस्तु नेपालमा छ भनेर ठोकुवा गरेको प्रमाण विभागसँग छ।
चिनियाँ तीर्थयात्री ह्वेन साङले सन् ५३६ मा लुम्बिनीको भ्रमण गरी तिब्बत फर्किएपछि डायरी लेखे। उक्त डायरीलाई 'चिनियाँ यात्रा वृत्तान्त' भनियो जसमा कपिलवस्तु नगरको छेउमा नदी बगेको र त्यहाँबाट हिमालय पर्वतको दृश्यावलोकन हुन्छ लेखिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, 'जुन अहिले पनि कपिलवस्तु छेउमा बाणगंगा बग्नु, हिमालहरूको दृश्यावलोकन प्रस्टसँगले गर्न सकिनु, सुरक्षा कि ल्ला प्राप्त हुनु, पश्चिमद्वार पत्ता लाग्नु आदिबाट पुष्टि हुन्छ। यी सबै कुराले प्राचीन कपिलवस्तु हालको तिलौराकोट नै हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन।'
दरबारको उत्तर र दक्षिणद्वार हालसम्म पत्ता लागेको छैन। पूर्वीद्वार पहिल्यै पत्ता लागिसकेको थियो। 'भारतको पनि केन्द्रीय सरकारमा कुनै विवाद छैन', उनले थपे, 'उत्तर प्रदेशको पर्यटन विभागबाट दाबी भइरहेको छ जसले पर्यटकलाई अल्मल्याइरहेको छ।'
कपिलवस्तुमा राजा सुद्दोदनका छोरा गौतम बुद्धले २९ वर्ष बिताएका थिए। यो ठाउँको खोजी पहिलोपटक भारतीय पुरातत्त्वविद् एवं लिपि विशेषज्ञ पूर्णचन्द्र मुखर्जीले सन् १८९८ मा गरेका थिए। 'सन् १९०१ मा मुखर्जीले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, प्राचीन कपिलवस्तु हालको तिलौराकोट हो भनेर', दाहालले भने, 'नेपालले गरेको उत्खननभन्दा अन्य देशको विज्ञले गरेको उत्खनन बढी आधिकारिक हुन्छ। उत्खननमा विशेषज्ञ भइसकेका कनिङघमले गर्ने उत्खननले थप पुष्टि हुनेछ।
मिति : २०७० पुस २२, सोमबार [112 पटक पढिएको]
Labels: Durhaam University, Rabin Kaniggham, कपिलवस्तु दरबार, भेषनारायण दाहाल, लुम्बिनी विकास कोष
पशुपतिको भोजन प्रसादी गृह मापदण्डविपरित
काठमाडौं : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र परिसरमा निर्माण भएको ‘भोजन प्रसादी गृह’ पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत पाइएको छ। गृह पशुपतिमा किरियापुत्रीले चोखिने क्रममा मलामीलाई बोलाएर खुवाउन निर्माण गरिएको हो।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषराज दाहालले अनुगमनका क्रममा गृह निर्माण प्रक्रिया मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको बताए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएको र उद्‍घाटन गर्न लागेको थाहा पाएपछि विभाग र कोषको टोलीले अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा नगरेको पाएका हौं।’ उनका अनुसार भवनअगाडिको भाग सिमेन्टको भएकाले पुरातात्त्विक नदेखिएको, झ्याल पनि ठूला राखिएको, पछाडिपट्टि फलामे भाग देखिएको, छानोको नमिलेको पाइएको छ।
अजय सुमार्गीले साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्चिएर नौ रोपनी जग्गामा उक्त गृह निर्माण गरेका हुन्। निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा नक्सा पेस गर्ने, त्यसलाई महानगरपालिकाले कोष र विभागमा पठाउने र दुवैबाट सिफारिस भएपछि भवन निर्माण गर्नुपर्छ। दाहालले नक्सा सिफारिस र पास गर्ने प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको बताए।
सुमार्गीले २०६८ वैशाखदेखि थालेको उक्त भवन गत १५ गते उद्घाटन गर्ने भनिएको थियो। उद्घाटनका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आग्रह गरेपछि चासो राख्दा यस्तो रहस्य खुलेको हो। नवनिर्मित भवनमा तीनवटा हल छन्। दुईवटामा दुई सय ५० जना र एउटामा पाँच सयजना अटाउने क्षमता छ। सुमार्गीले एउटा हल बुबा माधवराज, अर्को योगी नरहरिनाथ र अर्को थाहा दर्शनको नाममा बनाएका छन्।
अहिलेसम्म यस्तो भवन नहुँदा दैनिक तीन चारवटा पाल टाँगेर खुवाउने गरिन्छ। जसले फोहोर हुने गरेको छ।
कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टन्डनले नक्सा पासका क्रममा कोष, महानगरपालिका र विभाग सबै चुकेको बताए। उनले भने, ‘कोषले पनि नगरपालिकामार्फत काम भएको भन्दै ठीक होला भनेर गम्भीर भएन, विभाग पनि कोष र नगरपालिकालाई विश्वास गरेर बस्यो होला।’
पशुपति क्षेत्रमा भोजन प्रसादी गृह निर्माणजस्ता राम्रा काम भइरहेकाले गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो भवन कोषले बनाउनुपर्ने थियो तर दाताले बनाइदिएको अवस्था छ। यो कोषका लागि ठूलै सम्पत्ति हो।’ उनले कोष युनेस्कोले पशुपतिका काममा औंला नउठाओस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए।
निर्माणकर्ता सुमार्गीले पनि विभागसँग आफूले काम गर्दै जाँदा गल्ती भएको र नियमअनुसार सच्याएर जाने बताएको जानकारी विभागका एक कर्मचारीले दिए। भवन कोषलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोषले आम्दानीको ९० प्रतिशत पाउने र १० प्रतिशत भवन संरक्षणमा खर्च गरिनेछ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले विभागका प्राविधिक र भवन निर्माण गर्ने कन्सल्ट्यान्टको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझाउपछि मापदण्डअनुरूप पुनर्निर्माण हुनेछ।’
मिति : २०७० पुस २१, आइतबार
Labels: गोविन्द टन्डन, पशुपति, पुरातत्त्व विभाग, भेषराज दाहाल, भोजन प्रसादी गृह
लाखौं हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हुँदै
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा नष्ट भएका हस्तलिखित ग्रन्थमा माइक्रोफिल्म ।
काठमाडौं : तीन दशक लगाएर संग्रहित झन्डै दुई लाख ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हुन लागेका छन्। जर्मन सरकारको सहयोगमा नेपाल-जर्मन माइक्रोफिल्म परियोजनाअन्तर्गत तयार पारेर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका ती ग्रन्थ अम्लीय निर्माण (एसिड फर्मेसन) का कारण नष्ट बिग्रन थालेका हुन्।
६ वटा रिलका सयभन्दा बढी ग्रन्थ नष्ट भइसकेका छन् भने दुई सयवटा फिल्ममा समस्या देखिएको छ।
'राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक हस्तलिखित ग्रन्थ बिग्रन थालेका छन्', राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख प्रकाश दर्नालले अन्नपूर्णसँग भने, 'जर्मन सहयोगमा २०२६ सालदेखि ३२ वर्ष लगाएर तयार पारेका करिब दुई लाख ग्रन्थको माइक्रोफिल्म एसिडिकको प्रभावले बिग्रन थालेका हुन्। परियोजना सकिएको १३ वर्ष हुँदा ६ वटा फिल्मका सय भन्दाबढी ग्रन्थ बिग्रिएका छन्।'
यसको तत्काल विकल्प नखोजे सबै माइक्रोफिल्म बिग्रने उनको भनाइ छ। उनले नष्ट भएका रिलमा दुर्गन्ध आउनुका साथै च्यापच्याप लाग्ने र अक्षर उड्ने समस्या भएको जानकारी दिए। 'वर्ष दिनअघि सामान्य दुर्गन्ध आएको थियो तर परिणाम आकलन गर्न सकेनौं', उनले भने, 'समस्या गम्भीर महसुस भएपछि जापानिज विज्ञलाई देखायौं तर तत्काल संरक्षण नगर्ने हो सबै नष्ट हुने अवस्था छ।'
नेपाल संवत् ३१६ सम्म लेखिएका कर्मकाण्ड, पुराण, तन्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण आदि विषयका एक सय ५० भन्दा बढी ग्रन्थका फिल्म नष्ट भएको दर्नालले बताए। ती ग्रन्थहरू नेवारी, संस्कृत र हिन्दी भाषाका छन्।
अभिलेखालयका सहायक छविकार ज्योति न्यौपानेले माइक्रोफ ल्म सुरक्षित राख्दाराख्दै पनि समस्या देखिएको बताए। उनले नेपाल-जर्मन हस्तलिखित ग्रन्थ सूचीकरण परियोजना सञ्चालनका क्रममा फिल्ममा यस्तो समस्या देखिएको बताए। उनले भने, 'जुन तापक्रम र आद्रतामा राख्नुपर्ने हो त्यो समायोजन गरेका छौं। तर पनि सयभन्दा बढी ग्रन्थ नष्ट भइसकेका छन्।'
उनका अनुसार एउटा रिल सय फिटको हुन्छ भने एक फिटमा ६ वटा स्न्याप हुन्छन्। परियोजनाअन्तर्गत एक लाख ८१ हजार पाँच सय ग्रन्थ माइक्रोफिल्ममा संग्रहित गरिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'यी ग्रन्थका आठ हजार नौ सय ९५ वटा नेगेटिभ (मास्टर कपी) छन् भने नौ हजार पाँचवटा पोजिटिभ छन्। नेगेटिभबाट नक्कल गरेर पोजिटिभ बनाइन्छ।'
अनुसन्धानकर्ताले ग्रन्थ माग गरे अभिलेखालयले निश्चित रकम लिएर पोजिटिभ उपलब्ध गराउँछ। नेगेटिभ मूल प्रति हो भने पोजिटिभ सेवा प्रति हो। सेवा प्रति कामचलाउमात्र हुन्छ। पूर्णरूपमा नष्ट भएका ६ वटा रिलको अब सेवा प्रतिमात्र अभिलेखालयमा रहेको उनले जानकारी दिए।
अभिलेखालयका प्रमुख छविकार कुमार श्रेष्ठले नष्ट भएका ग्रन्थका फिल्मलाई समयमै डिजिटल रूपमा उतार्नुपर्ने बताए। हालसम्म नेपालमा माइक्रोफिल्म सादा (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) मा संग्रहित छन्। श्रेष्ठले भने, 'पोजिटिभबाट अर्को रिलमा कसरी सारेर जोगाउने भन्ने समस्या छ।' महँगो पर्ने भए पनि तिनलाई स्क्यानिङ गरेर डिजिटल रूपमा लैजानु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। माइक्रोसफ्ट फिल्ममा संग्रहित ग्रन्थलाई दुई सय प्रतिशतसम्म ठूलो पारेर हेर्न सकिन्छ।
अभिलेखालय प्रमुख दर्नालले फिल्मलाई 'डिजिटाइज्ड' गर्नका लागि नयाँ मेसिन चाहिने बताए। उनले भने, 'गुणस्तरीय मेसिन किन्न सरदर एक करोड रुपैयाँ पर्छ। यसका लागि पुरातत्त्व विभागमार्फत संस्कृति मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछौं।'
मिति : २०७० पुस २०, शनिबार [56 पटक पढिएको]
Labels: प्रकाश दर्नाल, माइक्रोफिल्म, राष्ट्रिय अभिलेखालय, हस्तलिखित ग्रन्थ